Tonga ao amin'ny iPad amin'ny lalao hazakazaka mahafinaritra ny Crazy Bird | Vaovao IPhone
Avy amin'ny tanan'ny Chillingo Ny lalao hazakazaka mahaliana dia tonga amin'ny iPad izay misy ny Crazy vorona no mpandray anjara fototra.
Amin'ny lalao Crazy Bird dia afaka misafidy iray amin'ireo isika Tarehimarika 5 avy amin'ny andian-tsarimihetsika handray anjara amin'ny iray amin'ireo hazakazaka manaitaitra.
Ny rafitra fanaraha-maso ny lalao dia tena tsotra ary mila manindry ny efijery ianao amin'ny fotoana mety hanararaotana ny hantsana ary hahazo ny hery ilaina mba hampitomboana ny hafainganao ary hahatratra ny tanjona amin'ny fotoana fohy indrindra. Raha efa nilalao ianao Elatra kely, mitovy ny fandidiana.
Ho fanentanana, ny lalao an'i Chillingo dia manolotra maody marobe amin'ny alàlan'ny fifandraisana WI-FI hahafahanao miatrika mpilalao manerantany.
Ny lalao Crazy Bird dia manerana izao rehetra izao, mitentina 0,79 euro ary azonao atao ny misintona azy amin'ny fipihana ity rohy manaraka ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny Mad Bird dia tonga amin'ny iPad amin'ny lalao hazakazaka mahafinaritra
Blutrol: Ataovy mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny lalao iCade amin'ny fifehezana amin'ny efijery, (Cydia)